Madaxweynaha Turkiga Oo Dawladda Sucuudiga Ka Codsaday Inay U Soo Gacan Geliso Dadkii Ka Dambeeyeen Dilka Weriye Jamaal Khaashugji. – somalilandtoday.com
Madaxweynaha Turkiga Oo Dawladda Sucuudiga Ka Codsaday Inay U Soo Gacan Geliso Dadkii Ka Dambeeyeen Dilka Weriye Jamaal Khaashugji.
(SLT-Istanbul)-Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa ka codsaday dowladda Sucuudi Carabiya inay usoo gacan geliso dadka ku sugan dalkaasi ee looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka weriye Jamaal Khaashugji.
Recep oo ka hadlayay shirka dalalka ku horumaray dhaqaalaha ee ka socday Argentina ayaa sheegay in arrinta Khaashuqji aanan loogu talagelin in shirka looga hadlo balse ra’iisul wasaaraha Canada, Justin Trudeau oo kaliya ah ayaa kulanka kusoo hadal qaaday dhacdada ku aadan Khaashuqji.
Dowladda Sucuudiga ayaa 11 qof u xirtay dilka balse ma jiraan go’aan ay dadkan ugu dhiibeyso Turkiga.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu si wayn ugu murugeysan yahay jaawabta uu Sucuudiga ka bixiyay dilka Jamaal Khaashuqji.
Wuxuu ku eedeeyay mas’uuliyiinta Sucuudiga inay hayaan been iyo hadallo is-burinayo isla markaasna ay baddalayaan sida ay wax u dhaceen ayna diideen inay macluumaad la wadagaan baarayaasha Turkiga.
Wuxuu sheegay in dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan uu kulanka madaxda G20 ka sheegay ‘sharraxaad aanan la rumeysan karin’ oo ku aadan dilka Khaashuqji.
Maxamed Bin Salmaan ayaa ku dooday in boqortooyada aanan eedeymo loo jeedin karin tan iyo inta laga caddeynayo dambiga.
Erdogan muxuu ka yiri dilka Khaashuqji?
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa ku tilmaamay arrinta ku saabsan saxafigii la waayey – xilli uu booqanayey qunsuliyadda Sucuudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbuul mid niyad jab ah. Saraakiisha Turkiga ayaa rumaysan in Jamal Khashoggi – oo ahaa nin dhaliila madaxda Sucuudiga – in lagu dhex dilay dhismaha qunsuliyadda.
Mr Erdogan ayaa sheegay in uu asago shakhsi ahaan isha ku hayn doono baadhitaanka lagu hayo arrintan, uuna dunida ku wargalin doono wixii kasoo baxa.
Jamal Khashoggi ayaa aaday qunsuliyadda uu dalkiisu ku leeyahay Istanbul talaadadii lasoo dhaafay si uu uga soo qaato warqado la xidhiidha arooskiisa oo dhici lahaa.
Taariikh nololeedkii Jamaal Khaashuuqji
Sooyaalka xirfadeed ee Jamaal Khaashuqji wuxu ka soo bilaabmay sannadihii ugu horeeyey xirfadiisa ee uu bilaabay weriyenimada, waayadaas oo ay saaxiibeen Usaama Bin Laadin, ilaa uu haatan noqday qof mucaarad ku ah Sucuudiga oo uu dalkana ka tagay.
Intaan la waayin raq iyo ruux ba maalintii uu galay Qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul, Khaashuqji oo dalkiisa iskii uga tagay wuxu u dhexeeyey oo kolba mid joogayey dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo Turkiga.
Wuxu Sucuudiga ka tagay bishii Sebtember 2017 ka dib markii ay isa seegeen maamulka Boqortooyada.
Dalalakaa dibadda ee uu joogay ayuu ka soo qori jiray aragtidiisa sida adag uu ugu dhaliilo maamulka Sucuudiga, oo waxa uu ku qori jiray wargeyska Maraykanka ka soo baxa ee Washington Post iyo sidoo kale boggiisa Twitter-ka ee aadka loola socdo oo ay ku xidhanyihiin in ka badan 1.6 milyan oo qof.
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionKhaashuqji boggiiska Twitter-ka waxa ku taxan 1.6 milyan oo qof
Dilka Jamaal Khaashuqji iyo siyaasadda Bariga Dhexe
Inta badan awoodaha qoyska boqortooyada waxaa gacanta ku haya Maxamed Bin Salmaan, dadka hadda looga shakinsan yahay dilka waxay hoos tagaan isaga, khuburrada ku sugan Sucuudiga waxay rumaysan yihiin inay suurogal ahayn in la fuliyay dilkan iyadoo aysan ammaro kasoo bixin maamulka sare ee boqortooyada.
Inta badan waxaa laga dhuur sugaya, inta ay gaarsiisan yihiin caddeymaha ah in Maxamed Bin Salmaan uu si toos ugu lug lahaa dhacdada.
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionMaxamed Bin Salmaan wuxuu sheegay in uusan wax ka ogayn dilka Weriye Jamaal Kaashogji
Turkiga muxuu ka qaban doona dilka Jamaal? Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu ceersanaya dhaxal sugaha sida Bisadda ay u ceersato Jiirka.
Recep wuxuu doonaya inuu xalliyo qalalaasaha isagoo raadinaya waddo sharci oo lagu maxkamadeeyo dadka lagu tuhunsan yahay dilka Khaashogji, wuxuuna farta ku fiiqaya dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan.
Turkiga iyo Sucuudiga waxay door muhiim ah ku leeyihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda gobolka, labaduba waa dalal Sunniyiin ah, waxay doonayaan inay majaraha u qabtaan hogganka dalalka Bariga Dhexe.
Erdogan waxay u noqonaysaa inuu adkeeyo arrimaha dalkiisa taaso u horseedi karto inuu xoojiyo xiriirka kala dhexeeyo Mareykanka.
Xiriirka xukuumadaha Washington iyo Riyadh kuma salaysno oo kaliya ah heshiisyada hubka, waxay lahaayeen xiriir soo jireen ah oo ay isu la wadaagaan muhiimadda straatiijiyadda gobolka iyo iskaashi dhanka xoojinta ammaanka.
Arrinta shidaalka ayaa ka qayb ah xiriirkooda, Mareykanka qudhiisa kuma tiirsano oo kaliya ah shidaalka ceyrinka ah ee Sucuudiga, boqortooyada waxay ku tiirsan tahay dhaqaalaha kasoo galo shidaalka.
Isbaddallada uu wado dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan waxay horseedeen tallaabooyin dhibaato leh, wuxuu mas’uul ka ahaa in Sucuudiga uu go’doomiyo Qatar , afduubkii ku meel gaarka ah ee lagu sameeyay ra’iisul wasaarihii Lubnaan iyo dagaalka Sucuudiga uu ka wado Yemen.
Howlgalka uu Sucuudiga ka wado Yemen wuxuu dhaliyay waxyeelleenta rayidka iyo maacluul dalkaasi ka taagan, waa sida Mareykanka uu qabo, siyaasadda dhaxal sugaha waxay kasoo horjeedaa fikradda ah suggida amniga dalka Yemen.
Xaaladda ayaa sii xumaatay sababtoo ah maamulka Trump wuxuu gogosha dhigtay guriga Maxamed Bin Salmaan.
Trump wuxuu doonaya saddex arrimood, inuu ka caawiyo dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada gobolka, wadahallada Falastiiniyiinta iyo Israa’iil iyo in Sucuudiga ka qayb qaato dadaallada maamulka Trump ee ku aadan xoojinta cunaqabataynta dhaqaale ee saran Iiraan.
Ma laga yaaba in Sucuudiga uu xakameeyo ninka sida xowli ah ku socda? Toddobaadkii lasoo dhaafay shirkii ganacsiga ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Riyadh waxaa si kalsooni ay ku dheehantahay u shir guddoominayay Maxamed Bin Salmaan oo ay u muuqatay in dalkiisa aysan waxbo ka qasnayn.
Ruushka wuxuu sheegay inuu ka dhuur sugayo baaritannada socda isla markaasna la aamino hadalka Sucuudiga uu kasoo saaray dilka Kaashogji, xukuumadda Moscow waxay ku rajo wayn tahay in mustaqbalka Sucuudiga ay la gasho heshiis dhanka hubka ay uga iibinayso.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionCeelasha shidaalka Sucuudiga
Madaxweyne Vladimir Putin wuxuu doonaya inuu xoojisto danaha uu ka leeyahay dalalka gobolka.
Reer galbeedku,waxay ogyihiin in hubka inuu yahay seef labo af leh, balse waxaa uga darran dhaqaalaha ay ka helayaan, Sucuudiga inaba kama maarmo hubka uga yimaado reer galbeedka.
Hubka, khuburrada iyo la-taliyeyaasha reer galbeedka ayaa sababay in diyaaradaha Sucuudiga ay weli duqeyn ka gaystaan hawada dalka Yemen.